Bible Nkɔmhyɛ Ahorow a Abam Ne Nkɔmhyɛ a Ɛrenya Mmamu Nnɛ
Yɛadi kan aka atesɛm bi. Ɛne sɛ ɔkɔmfo bi a ofi Delphi daadaa Croesus ma ɔne Persia hene kɔkoe. Wei maa Croesus dii nkogu. Nanso Bible no hyɛɛ nkɔm soronko bi faa Persia hene ho ma biribiara baa mu pɛpɛɛpɛ.
Bɛyɛ mfe pɔrepɔre 200 ansa na wɔrewo Ɔhene Kores no, odiyifo Yesaia a ɔyɛ Hebrini no bɔɔ saa ɔhene yi din, na ɔkyerɛɛ sɛnea obedi Babilon man a wɔn ho yɛ den no so nkonim.
Yesaia 44:24, 27, 28: ‘Nea Yehowa se ni: ‘Me na meka kyerɛ subun sɛ, “Yow, na mɛma wo nsubɔnten nyinaa ayoyow koraa.” Me na meka Kores ho asɛm sɛ, “Ɔyɛ me guanhwɛfo, na nea ɛsɔ m’ani biara ɔbɛyɛ,” ne nea maka afa Yerusalem ho sɛ, “Wɔbɛsan akyekye,” ne asɔrefie no ho sɛ, “Wɔbɛto wo fapem.”’’
Helani abakɔsɛm kyerɛwfo Herodotus kyerɛ sɛ, Eufrate Asubɔnten a ɛsen fa Babilon kurow mu no, Kores asraafo no paee kwan foforo ma ɛfaa mu kɔe. Nea Kores yɛe yi, ɛmaa n’asraafo no nantew faa asubɔnten no mu kɔɔ kurow no mu. Bere a Kores nsa tɔɔ kurow no so no, ogyaee Yudafo a na wɔde wɔn ayɛ nkoa wɔ Babilon no, na ɔmaa wɔsan kɔɔ wɔn kurom Yerusalem. Saa bere no, na wɔasɛe Yerusalem ma mfe 70 atwam, enti Yudafo no san kyekyee kurow no.
Yesaia 45:1: “Asɛm a Yehowa aka akyerɛ Kores, nea wasra no, nea maso ne nsa nifa mu sɛ mɛbrɛ aman ase na masan ahene abɔso n’anim, na mabue apon a ɛbɔ ho abien ama no, na wɔanto kurow apon mu no ni.”
Biribi nti Babilonfo no gyaw wɔn kurow apon akɛse a ɛbɔ ho mmienu no too hɔ a wɔannwen ho. Enti Persiafo no faa ɔpon no mu bɔ wuraa kurow no mu. Sɛ Babilonfo huu nea na Kores pɛ sɛ ɔyɛ a, anka apon a ɛkyerɛ asubɔnten no so nyinaa no, wɔbɛtoto mu. Nanso amma saa. Enti, na kurow no nni ahobammɔ.
Yɛreka nkɔmhyɛ ahorow a ɛwɔ Bible mu a abam pɛpɛɛpɛ ma ɛyɛ nwonwa a, wei yɛ emu baako pɛ. * Sɛ nnipa hyɛ nkɔm a, wɔtaa ka sɛ efi wɔn atoro anyame bi hɔ. Nanso Bible mu nkɔmhyɛ de, efi Onii a ɔkaa saa asɛm yi hɔ: “Me na mifi mfiase ka awiei asɛm, na mifi tete ka nea ensii.”—Yesaia 46:10.
Nokware Nyankopɔn a ne din de Yehowa no, ɔno nkutoo na obetumi aka saa asɛm yi. Ɛda adi sɛ saa din no kyerɛ “Nea Ɔma Ɛyɛ Hɔ.” Wei kyerɛ sɛ, obetumi ahu daakye asɛm na wɔasesa nneɛma mu ma ɛne n’apɛde ahyia. Ɛma yɛn awerɛhyem sɛ, ɛbɔ a wɔahyɛ nyinaa, ɔbɛma abam pɛpɛɛpɛ.
NKƆMHYƐ AHOROW A ƐRENYA MMAMU NNƐ
Wopɛ sɛ wuhu nkɔm ahorow a Bible ahyɛ afa yɛn bere yi ho anaa? Bɛyɛ mfe 2,000 a atwam ni, Bible hyɛɛ nkɔm sɛ “nna a edi akyiri mu” no, “mmere a emu yɛ den bɛba.” Ɛyɛ nna a edi akyiri ma dɛn? Ɛnyɛ nna a edi akyiri ma asase anaa nnipa, mmom no, ɛyɛ nna a edi akyiri ma nitan, nhyɛso, ne amanehunu a ateetee nnipa mfe mpempem pii ni no. Nkɔmhyɛ ahorow a ɛma yehu sɛ yɛwɔ “nna a edi akyiri mu” no, ma yensusuw emu kakra ho nhwɛ.
2 Timoteo 3:1-5: “Nna a edi akyiri mu no, . . . nnipa bɛyɛ ahopɛ, sikanibere, ahohoahoa, ahantan, wɔn a wɔka abususɛm, awofo so asoɔdenfo, bonniayɛfo, wɔn a wonni nokware, wɔn a wonni tema, wɔn a wontumi ne wɔn nyɛ apam, dinsɛefo, wɔn a wontumi nni wɔn ho so, wɔn a wɔyɛ keka, wɔn a wɔmpɛ papa, wɔn a woyi afoforo ma, wɔn a wɔyɛ asobrakye, wɔn a wɔyɛ ahomaso, wɔn a wɔdɔ anigyede sen Onyankopɔn; wɔde nyamesom pa adura wɔn anim, nanso wɔmfa tumi a ɛwom no nyɛ adwuma.”
Wunnye ntom sɛ ɛnnɛ, nnipa a wɔda saa su yi adi no redɔɔso? Woahyɛ no nsow sɛ ɛnnɛ, nnipa a wɔatwa yɛn ho ahyia no, wodwen wɔn nkutoo ho, wɔn ani bere sika, na wɔde ahomaso na ɛyɛ ade? Wunhu sɛ nnipa ayɛ nhyɛ, nanso wo ne wɔn fa adwene nso a ɛnyɛ yiye? Ɛnyɛ dɛn ara a, woahu sɛ nnipa bebree mmu wɔn awofo, na nnipa dodow no ara pɛ anigyede sen Onyankopɔn. Afei nso, ade rekye a ade resa nyinaa, nneɛma sɛe ara na ɛresɛe.
Mateo 24:6, 7: “Mobɛte ɔko ne ɔko ho amanneɛbɔ; . . . Ɔman bɛsɔre atia ɔman na ahenni atia ahenni.”
Ebinom bu akontaa sɛ, sɛ woka nnipa a wɔawuwu wɔ akodi akɛse ne nketewa mu fi afe 1914 no nyinaa bɔ mu a, wɔn dodow boro ɔpepem 100. Aman bebree wɔ hɔ a, ɔman no mu nnipa dodow nyinaa mpo nnu ɔpepem 100. Sɛ wohwɛ sɛnea nnipa bebree awuwu wɔ akodi mu no a, wunhu sɛ ɛde osu, awerɛhow ne amanehunu kɛse aba? Enti amanaman no asua biribi afi mu ma enti wɔagyae akodi anaa?
Mateo 24:7: ‘Aduankɔm bɛba.’
Boayikuw a Ɛhwɛ Wiase Aduan Ho Nsɛm So kaa sɛ: “Saa bere yi, aduan a ɛwɔ wiase no betumi asõ nnipa nyinaa. Nanso anadwo biara nnipa ɔpepem 815, kyerɛ sɛ wofa nnipa nkron biara a, baako da so ara de kɔm da. Nea ɛsen saa mpo no, wofa nnipa mmiɛnsa biara, baako nnya aduan papa nni.” Wobu akontaa sɛ, afe biara, ɔkɔm kunkum mmofra bɛyɛ ɔpepem mmiɛnsa.
Luka 21:11: “Asasewosow akɛse bɛba.”
Asasewosow bi wɔ hɔ a ano den nti nnipa te; afe biara asasewosow a ɛte saa bɛyɛ 50,000 sisi. Afe biara, asasewosow bɛyɛ 100 sɛe adan pa ara, na asasewosow baako a ɛyɛ hu pa ara nso si. Akontaabu bi kyerɛ sɛ, efi afe 1975 kosi 2000 no, asasewosow akunkum nnipa 471,000.
Mateo 24:14: “Wɔbɛka ahenni ho asɛmpa yi wɔ asase so nyinaa de adi amanaman nyinaa adanse; ɛno ansa na awiei no bɛba.”
Yehowa Adansefo bɛboro ɔpepem nwɔtwe ka Onyankopɔn Ahenni ho asɛmpa, na wodi ho adanse wɔ nsase bɛyɛ 240 so wɔ wiase nyinaa. Wɔka asɛmpa no wɔ nkurow akɛse ne nketewa mu, pɔw mu, ne mmepɔw so. Nkɔmhyɛ no kaa sɛ, sɛ yewie adwuma no sɛnea Onyankopɔn pɛ a, “awiei no bɛba.” Ɛno kyerɛ sɛn? Ɛkyerɛ sɛ nnipa tumidi bɛba awiei, na Onyankopɔn Ahenni afi ase adi tumi. Sɛ Onyankopɔn Ahenni redi tumi a, bɔhyɛ ahorow bɛn na ɛbɛbam? Toa akenkan no so na wubehu.
^ nky. 8 Hwɛ asɛm a yɛato din “Ɛnkasa, Nanso Edi Adanse Sɛ Bible Nkɔmhyɛ Yɛ Nokware.”